XOG: Madaxweynaha Puntland oo Dubai kula kulmaya Madax ka tirsan Imaaraadka - Awdinle Online
XOG: Madaxweynaha Puntland oo Dubai kula kulmaya Madax ka tirsan Imaaraadka
Madaxweynaha Dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, oo ku sugan magaalada Dubai ee waddanka Imaaraatiga Carbeed, ayaa lagu wadaa in uu halkaasi kula kulmo mas’uuliyiinta u sarraysa Shirkadda DP World oo gacanta ku haysa Dekedda Boosaaso.
Madaxweyne Deni oo maalmo ku sugnaa Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya, ayaa uga sii gudbay Imaaraadka Carabta, waxaana safarkiisa ugu muhiimsan in uu la kulmo mas’uuliyiinta Shirkadda DP World.
Madaxweynaha Puntland ayaa la filayaa in uu mas’uuliyiinta DP World kala hadlo, arrinta Dekedda Boosaaso oo aysan wax shaqo ah ka qaban mudadii ay gacanta ku haysay, islamarkaana ay ciid ka buuxsantay.
Shirkadda DP World, waxay Dekedda Boosaaso kula wareegtay heshiis la saxiixay 6-dii April 2017, kaas oo Baarlamaanka Puntland ansixiyay 27-kii July ee isla sannadkaas.
Previous articleCiidammada dowladda oo Shabaab kala wareegay tuulo istiraatiiji ah
Next articleWeerar Caawa ka dhacay degmo ka tirsan Gobolka Gedo